U-Katy Perry noHeidi Klum ekuvuleni inkanyezi iMinnie Mouse eHollywood
Izinkanyezi zabo ku-Walk of Fame eHollywood ayitholakali kuphela ngabenzi befilimu, kodwa futhi nabalingiswa be-cartoon. Ngolunye usuku, udumo olunjalo lunikezwa uMinnie Mouse othakazelisayo, owayeneminyaka engu-90 ubudala, nakuba ungeke ukwazi ukusho ngendlela.
NgoMsombuluko, behalalisela umlingani wakho ozithandayo kuleli holide kwafika abalandeli befilimu yamafilimu i-animated i-Disney - 33, u-Katy Perry oneminyaka engu-33 ubudala, no-Heidi Klum oneminyaka engama-44 ubudala ongumJalimane. Izidumi zazijabulisa njengabantwana, ezemidlalo yecala lomkhosi.
U-Katy Perry umcimbi weMinnie Mouse
UHeidi Klum emcimbini wokuhlonipha uMinnie Mouse
Umncintiswano uMinnie Mouse
U-Katy Perry, ongasetshenziselwa ukugqoka izingubo nokuziphatha okudangayo esiteji nasemaceleni, ngokuphatha ngokuhloniphekile umsebenzi ohloniphekile futhi egqoke njengegundane le-nanny.
Ngaphambi kwezilaleli, umculi wabonakala enhlobonhlobo ebomvu ebomvu yamapayipi amhlophe e-Christian Siriano. Kwakuqukethe i-crochet-top ene-ruffles emikhulu emikhondeni, iketi elifushane eliphethe i-flounce nesikhwama esikhulu.
Izibuko zemibukiso ngesimo sezinhliziyo, amacici afanayo namasithende amnyama nge-strap wanezela umnsalo we-cartoon.
UHeidi Klum naye waphatha ngokuhlonipha ikhodi yokugqoka yomcimbi, egqoke ingubo ehlathini. Ekusebenzeni kwe-supermelel, igundane lenzeke ngokuhlukahluka okuvamile. UHeidi wayegqoke izingubo ezimnyama nezingubo ezimhlophe, ubude obudolo, futhi ikhanda lakhe lalihlotshiswe ngezindlebe ngomnsalo.
UHeidi Klum noThomas Kaulitz babonwa ngokuhamba ngothando e-yacht
Kunzima ukwazi: U-Katy Perry emasikini okuzithokozisa wesaba i-paparazzi
U-Amber Hurd uchitha isikhathi noVito Schnabel
Ngendlela, abalandeli bakaMinnie Mouse ezulwini zesikhombisa zenjabulo, bejabula ngokuthi ekugcineni ubulungisa buphumelele. Iqiniso liwukuthi umlingani wesibuko wegundane, uMickey Mouse, wathola inkanyezi eminyakeni engama-40 edlule, ngosuku lwakhe lokuzalwa lwama-50 ngo-1978.
UBrad Pitt okokuqala ngqa ngemuva kokuphumula no-Angelina Jolie bevela esiqongweni somagazini
UNeil Patrick Harris wabulala eMiami ngehora le-Oscar-2016
I-Sports Illustrated cover yavela noCainlin Jenner
Ubuhle kufanele bube ngokulinganisela? U-Angelina Jolie uphinde wabulala izilaleli
UVictoria noDavid Beckham bahalalisana ngomkhosi womshado
I-Christian Bale engaziwa ngokuyinhloko kwi-movie yesenzo esithi "Izitha" eLos Angeles
UMargot Robbie ubonise lover wakhe ongaqondakali
U-Taylor Swift ubizwa ngokuthi udumo oluphakeme kakhulu okhokhelwe ngo-2016
UJohnny Depp esemusha
U-Jay Lo uphazamisekile: umculi angakwazi ukuxhumana nomndeni wakhe ePuerto Rico
Sijabule ndawonye: u-Alec Baldwin ulungiselela ukuba ubaba okwesihlanu!
U-Ashton Kutcher wabelane nabalandeli isithombe esihle futhi esingajwayelekile nesendodana yakhe
UJennifer Lopez uhlangana ne-baseball star Alex Rodriguez
Othandana naye uGwyneth Paltrow wamenyiwe ngosuku lokuzalwa lomdlali
I-humidifier ye-portable emoyeni
U-Alicia Wickander no-Oscar-2016
Ukholifulawa ubhaka kuhhavini noshizi
Izibungu zami zesisu - yini engingayenza?
I-polyp yomsele womlomo wesibeletho - izimbangela
I-bark e-Willow - izakhiwo eziwusizo
Chamomile ekukhulelwe kokuqala
Indlela ukupheka khinkali ekhaya?
Izitatimende - "for" futhi "ngokumelene"
Umanyolo "Kalimagnezia" - application
Imfundiso yezintambo nokulinganisa okufihliwe kwendawo yonke kuwubufakazi bokuthi kukhona khona
Ukulungiselela izihlahla zezithelo ebusika
Recipe for cutlets inkukhu cutlets
Intombi kaJim Carrey yaziphanga?
I-carnival mask ngezandla zakho - isigaba samakhosi esinyathelo ngesinyathelo
U-Katy Perry wabeka u-kiss wokuqala kumncintiswano oneminyaka engu-19 ubudala